Kiev ingenye yamadolobha semithombo Europe. It is a capital amatasatasa of Ukraine ozimele, zokuphatha yayo, kwezomnotho, zesayensi, isikhungo kwezamasiko kanye nezemfundo. Lo muzi ebabazekayo nge elinabantu phezu 3 abantu abayizigidi ezingu isendaweni ogwini River Dnepr.
Kiev lingumuzi izikhumbuzo zomlando kanye namasiko olungenakuqhathaniswa, umuzi izenzakalo ezinkulu kanye nabantu ezivelele. Wonke umuntu uzothola khona okuthile ngokukhethekile ngenxa ngokwakhe.
Ubuciko kanye izakhiwo Kiev abhekwa njengamagama ingcebo emhlabeni. Izingcweti eziningi abadumile, izimbongi nabalobi kulinganiselwa ubuhle eliyingqayizivele lo muzi. Lapho zibona lezi zindawo abadume kunabo zihlanganisa: Cathedral of St. Sophia ne yamatshe ezivelele kanye nemidwebo eyaqala ngekhulu le-11; Kievo-Percherskaya Lavra featuring izigodlo zezindela eziningana futhi ababhishobhi; Golden Gate Kiev, okuyinto usuku emuva 1037; Ukraine Baroque Church of St. Andrew; ezinhle Cathedral wangekhulu le-19 St. Vladimir; kanye nezinye eziningi ezikhangayo. Kiev uvame ukubizwa njengoba “ngunina wabo bonke imizi” by baseRussia Ukraine. Kuyinto elinye lamadolobha amadala kakhulu eYurophu. In the isikhungo somlando Kiev ungaziqhenya umoya esidlule yonke indawo.
Kiev is zihlukaniswa for ukuphila kwayo konke ocebile zamasiko. nabathandi bemidlalo yaseshashalazini uzothola yeshashalazi eminingi ukunikela izinhlelo ezahlukene waseshashalazini. ukusebenza Iningi aphethwe Ukraine noma Russian. The muva esilungisiwe Kiev Opera House kuveza opera ezinhle kakhulu kanye repertoire ezibanzi ballets. Ivan Franko Theater iyisikhungo drama Ukraine, comedy, nomculo. A lot of nemibukiso ehlukahlukene eyenziwa eminyuziyamu eziningi leli dolobha lalilihle futhi zobuciko.
Kiev liyisikhungo zesayensi nemfundo Ukraine ozimele. inguqulo eyasetshenziswa emayunivesithi ahlukahlukene kanye nesayensi kuhlanganise odumile Kiev-Mogilyanskaya Academy, okuyinto ingenye izikhungo lokuqala zesayensi aseMpumalanga Yurophu, akhiwe khona.
Njengoba idolobha elikhulu kunawo wonke e-Ukraine, Kiev kuyinto ehamba phambili ezimbonini kanye nezentengiselwano yezwe. izimboni ezinkulu Kiev ihlanganisani: ukuqhutshwa ukudla (ikakhulukazi ngokucubungula sugar beet), yokusansimbi, ukwakhiwa imishini, amathuluzi umshini, isitokwe rolling, amakhemikhali, zokwakha, kanye nendwangu. Ukuthuthukiswa Umnotho Ukraine wanika nesifiso umsebenzi ibhizinisi ngaphandle komuzi. Kunezinto eziningi izikhungo Kunikezelwa isakhiwo esisha ehhovisi, amabhange, izikhungo ezohwebo embukisweni kanye nezinye ukulibona kwezentengiselwano evele edolobheni namuhla.
Thatha walk emigwaqweni yaleli dolobha ebabazekayo wasendulo, bazizwa ubuhle layo eliyingqayizivele umoya umlando wayo wokuqhuma kwezintaba. Ukuze uqiniseke ukuhlala kwakho e Kiev uyoba omunye nakho kwakho esimnandi kakhulu.
Indawo: 827 skwele
Indawo: isifunda Kievan, eMfuleni Dnepr
kwendawo: 50 28 N, 30 29 E
Population: 2,900,000 (2001 kuyinto.)
Climate: esipholile yezwekazi. It is ikakhulukazi libhekene kwezulu ziningi futhi cloudiness ebusika nokuwa. Ubusika ngokuvamile eside futhi kubanda. Ihlobo isikhathi esifushane kodwa kungaba pretty hot.
UTC / GMT Offset: UTC / GMT + 2 amahora
ikhodi Indawo: 44
ezikhangayo Major: St. Cathedral Sophia sika, Uspensky Cathedral, St. Michael Monastery, Kievo-Pecherskaya Lavra, Golden Gate, Andreyevsky Spusk.
izimboni ezinkulu: Metallurgy, umkhakha engineering, amakhemikhali, elukwako, ukuqhutshwa ukudla, zokwakha, imikhiqizo kagesi, gas, amafutha, embonini yamalahle kanye Peat, Woodworking umkhakha.